Agreedo: Ka Dhigista Shirarku Mid Waxtar Leh | Martech Zone
Agreedo: Sameynta Kulamada Waxsoosaar Badan
Axad, Oktoobar 9, 2011 Axad, Oktoobar 9, 2011 Douglas Karr
Markii aan u shaqeynayey shirkad weyn oo softiweer ah, mar baan joojiyey inaan shirarka u aado tijaabo ahaan. Kooxda Maamulka Waxsoosaarka waxay lahaayeen shirar loo qorsheeyay usbuuca oo dhan mararka qaarkoodna 8 saacadood oo buuxa maalintii… la kulanka macaamiisha, iibka, suuqgeynta, horumarka, iyo taageerada. Waxay ahayd waalli. Waxay ahayd waalli maxaa yeelay ururku wuxuu jeclaa la kulanka laakiin waligood runti ma uusan qaban shaqaalahooda xisaabtan in waxkasta lagu dhammeeyo kulanka.
Marka, muddo 2 toddobaad ah kama aanan xaadirin hal kulan. Dadkii fasiray waxay faallo ka bixin jireen inaanan halkaas joogin, qaar ka mid ah dadka la shaqeeya ayaa ku kaftami doona ama ka xanaaqi doona arrintaas… laakiin ugu dambayntii, madaxdayda xilligaas ayaan dan ka lahayn. Isagu ma daryeelin sababtoo ah aniga waxsoosaarka ayaa si weyn kor ugu kacay. Dhibaatadu waxay ahayd in shirarku curyaaminayeen ururka… oo ay i curyaamiyeen. Sababta Si fudud haddii loo dhigo - dadku weligood waxba lagama baran goorta la qabanayo shir ama sida loo yeelanayo kulan wax ku ool ah. Nasiib darrose, maahan wax ay ku barayaan kulliyadda.
Waan ku saabsan kulamada xoogaa… waa xayawaan xayawaan ah oo tayda ah. Xitaa waxaan sameeyay bandhig taas shirarku waxay mas'uul ka ahaayeen dhimashada wax soosaarka Mareykanka. Sidoo kale waa sabab kale oo aan u jeclahay a Natiijooyinka Kaliya Deegaanka Deegaanka. Haddii shirarka aan si habboon loo qorsheynin oo aan jadwal loo qaban, waa waqti lumis aan caadi ahayn oo qof walba waqtigiisa ku lumiya. Haddii aad 5 qof ku leedahay qolka shirkad, fursadaha ayaa ah in shirarkaagu ay ku kacayaan $ 500 saacaddii. Ma lahaan lahayd tiro badan haddaad sidaas uga fikirto?
Hadda waxaa jiri kara tiknoolajiyad caawin kara ururkaaga. Waan ku raacsanahay waa barnaamij bilaash ah oo adeeg ahaan ah (SaaS) oo awood kuu siinaya inaad hubiso in shirarkaagu si habboon loo qorsheeyey, natiijooyinka ujeedo leh, wada shaqeyn iyo inta badan oo dhan - wax soo saar leh.
Kahor kulanka: AgreeDo waxay kaa caawineysaa inaad abuurto ajandayaal kulan. Dhammaan kaqeybgalayaashu ha iska kaashadaan ajandaha kulanka kahor, si qofwalba uu udiyaar garoobo.
Intii kulanka socday: Hadday tahay kulan caadi ah, ama dood ku-meel-gaadh ah, qaado daqiiqadahaaga kulanka adoo adeegsanaya AgreeDo. Waxay kaa caawinaysaa inaad si fudud u qabato dhammaan arrimaha muhiimka ah sida hawlaha, go'aannada, ama qoraalada.
Kulanka kadib: U dir daqiiqadaha kulanka dhamaan kaqeybgalayaasha kana wada shaqee natiijooyinka. AgreeDo waxay kaa caawineysaa inaad la socoto howlaha iyo inaad si fudud jadwal ugu sameysato kulamada dabagalka ah.
Interface ee Waan ku raacsanahay waa mid ku wajahan natiijada:
Waadna hubin kartaa howlahaaga kulan waqti kasta oo aad ka dhex gasho:
Haddii shirkaddaadu ay dhibaataysan tahay kulanka waxayna ubaahantahay xoogaa caawimaad ah, ku riixida shaqaalahaaga inay adeegsadaan AgreeDo waxay leexin kartaa ururkaaga! Isdiiwaangeli AgreeDo for free.
Tags: niyad-jabkanabaddailaalintareStabilitykhadka mawduuca
Halka ay dadku ku isticmaalaan Taleefoonadooda casriga ah
Fahamka Isticmaalayaasha iPhone